ओली सरकारकाे तीन वर्ष पूरा, यी हुन् मुख्य काम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेकाे छ। सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न ८९ वटा नयाँ कानुन निर्माण गरेकाे, लाेडसेडिङ हटाएकाे तथा विकास निर्माणले गति लिएकाे बताएका छन्। बजेटकाे आकार बढेकाे दाबी गर्दै उनले प्रतिव्यक्ति आय समेत बढेकाे दाबी गरेका छन्।
ओली सरकारका तीन वर्ष : के के भए काम? प्रधानमन्त्रीकै नजरमा (पूर्णपाठ)
deshsanchar.com16 दिन पहिले
सरकारका तीन वर्ष : आलोचकको नजरमा कस्तो रह्यो ?
ओली सरकारका तीन वर्ष : संविधानमा प्रहार, जनादेश अपहरण